Underfloor eziyizinhlobonhlobo uxhumano
Ukushisa kwamanzi phansi Sekuvamile ngaphezulu amakhaya ngabanye. Inqubo kudala iyunifomu ngaphezulu lokushisa ukusatshalaliswa ezakhiweni, okuwenza mnandi futhi bafudumale - ukonga 10-15%. Ngo eliphezulu liphumele izakhiwo le ndlela kungavunyelwe yokuxhuma eyodwa Ukushisa izinhlelo kanye nezinhlelo zokusebenza ngenhla esitezi sokuqala. phansi bafudumale system lolucuketse:
Collector Ukushisa phansi;
sokulinganisa nokulawula amadivaysi.
Okuphuma kubhayela kuyakhethwa kunangendlela ukuthi kohlelo bafudumale. Ezindlini endaweni enkulu kudinga radiators ezengeziwe. Kufanele kukhunjulwe ukuthi kungase kudingeke okwengeziwe amanzi ashisayo ngoba yokugezela ekhishini. Konke lokhu kufanele uhlinzeke imbiza ezivamile.
Design kanye nokusebenza Ukushisa underfloor
Warm amanzi phansi ingenye eziningi zalezi zinsuku bafudumale izinhlelo. kokupholisayo lokushisa ingeqi 55 ° C. Uma kuwukuthi ephakeme, phansi kushisa kuzodala ukungakhululeki. Ukuze izinyawo uyabukeka kusukela ngokuthinta phansi, izinga lokushisa kwamanzi phansi lendwangu kumele singeqi 35 ° C. I lokushisa kokupholisayo enikeziwe kusukela kubhayela ngokuvamile ephakeme. Ngakho-ke, ukuxuba inhlangano ezininginingi senziwa ngokuxuba evuthayo futhi selehlile amanzi. I lokushisa kokupholisayo ubeka thermostat.
Ukushisisa amashubhu makhula screed ukhonkolo yokuqedela. uhlelo Autonomous Ukushisa ngokusebenzisa phansi ihlangabezana nazo zonke izidingo zanamuhla:
ukusebenza kahle eliphezulu;
Izakhiwo zihlukaniswe izingxenye cishe 40 m 2, nge izihibe ngazinye hhayi engaphezu kwengu-60 m kanye ezivuzayo uhlawula eduze kwemingcele. Phakathi isayithi ngayinye kudala Ukushisa ekhazimulayo phansi. UNkulunkulu wayengajabule ngalendoda ixhunywe phambili bese ukuhlanekezela amapayipi wesifunda ngamunye, futhi ngokusebenzisa isiqondiso kokupholisayo ukugeleza senzeka. Amanzi ukufuthelana kusuka kubhayela kwasakazwa ku wabuka futhi selehlile phansi ukubuyiselwa ngokusebenzisa emuva. izihibe evuthayo abe ubude ezahlukene amapayipi. Ngaphansi izindima ezifanayo ngoba input bese okukhipha ngepayipi iDemo kuzodlula amanzi angaphezu kuka eside. Ngakho, izindawo uzobe ukufuthelana ehlukile. On Isifunda ngasinye siqhuba kuyadingeka ukuqinisekisa predetermined ukugeleza kwamanzi, ukuze kukhona ukusatshalaliswa umfaniswano ukushisa kulo lonke uhlelo. Inkomba iyona lokushisa elifanayo kokupholisayo emgqeni ukubuya kuzo zonke izihibe. Kulokhu ukushisa uyokwendlala ngokulinganayo phansi ekhaya.
Inhloso ngalendoda kudivayisi
underfloor ngalendoda ukhonza isabelo sokwaba umfaniswano kokupholisayo kusukela kubhayela ukuthi isikhala evuthayo bese ubuyela kabusha kushiswa ukugeleza isiyingi. Ngalo, zonke izifunda ubukele uxhumeke lokushisa elinqunyiwe, iveza yokondla nkinga amanzi, kanye nokususa emoyeni kusukela ohlelweni. Ikhipha ngalendoda yakhelwe njengoba truby- "ikamu" nge uxhumano Ukushisa izifunda. Kufanele bazame ukwenza wonke obulinganako.
Lapho indlu yakhelwe Ukushisa ekhazimulayo phansi, ngalendoda ibekwe endaweni ekahle, njengoba cimeza njengoba enzeka enkabeni ohlelweni bafudumale. Kube efanayo ifektri ipayipi loops ne bend ilungile futhi ixhumanisa ukunikezela ukudedelwa kokupholisayo. Ukuze ukushintshanisa ipayipi nezimo, phansi ngakwesobunxele isikhundla. Top band uya kusukela ukunikezela ukubuya ezininginingi nge valve noma valve. Indawo kufanele asuswe heater nendawo obondeni. The best ukubeka imishini Ekhabetheni ekhethekile. Kufanele ibekwe phezu Ukushisa underfloor, kwaba ezikahle ukuthatha emoyeni aphume amapayipi. wonke Uhlelo ixhunywe kokucindezelwa nokufakwa.
A samuntu okulula iqembu ukubuthwa
Sebenzisa manifolds elula nge elawula valve futhi ukugeleza amamitha emihlanganweni yesifunda ngamunye, kanye ivale-off valve ukuphakela noma ukuvala kokupholisayo. Lolu hlelo awunankinga yokwenze emizini yabazalwane, lapho kungekho abalulekile ingcindezi iyehla iyenyuka bese lokushisa kule amapayipi. Ungakwazi ukwakha ezininginingi Ukushisa elula phansi ngezandla zakhe, ukuthi ngabe imali. Ububi iyona ukuncika kushintsha izinga lokushisa kanye kokupholisayo ukugeleza rate of kubhayela, kanye nemibandela zangaphandle.
Abaqoqi yesimanje Ukushisa izinhlelo
uxhumano Okugcwele underfloor ezininginingi inikezwe khona imishini elandelayo ozikhethela:
a ukuxuba umhlangano noma ezintathu-indlela mixer;
nabalawuli thermostatic futhi ukugeleza besifunda ngasinye;
I okubalulekile kungenzeka plastic noma insimbi. underfloor ngalendoda eyenziwe polypropylene, insimbi engagqwali noma zethusi. It ukukhwezwa ukulawula ama-valve, ingcindezi Izikali, thermometer, nokufakwa, ama-valve. Ngo idivayisi amanzi ekhethekile ashisayo futhi sigodole axutshwa, futhi izinga lokushisa predetermined akhishwa phakathi ezininginingi okuphakelayo. Ukubuya amapayipi uxhumeke kwi-kubhayela ngokuvala isiyingi kokupholisayo Uhlelo kwegazi. Amanzi selehlile ebuyiselwa ukubonisa, bese uya emuva ohlelweni. Supply ezininginingi njalo engaphezulu ukubuya emoyeni ukuzwakalisa futhi iqukethe.
Uzotshala kanye ukuxuba iyunithi yakhiwa emithathu endleleni valve efakwe kwayo kuleyo ndawo yokuhweba kohlelo ukubuthwa. It is kulawulwa hot kuphela amanzi ukusetshenziswa, nokusakaza selehlile alushintshi. Isibandisi ingcindezi evela okhiqizwayo alondolozwa futha.
Lapho eyanele ketshezi kwegazi mixer setha ngaphandle futha.
Ukuze ukusatshalaliswa umfaniswano kokupholisayo ukuba ngamunye wesifunda setha ukugeleza nabalawuli. Inani Ukushisa izihibe kufanele uhambise amanzi amaningi ukuze ukushisa ukuthi ngokufanayo kuyo yonke indawo. Ukuze wenze lokhu kusethwa izinga eqondiswa ukusetshenziswa ukushisa emagcekeni njalo ngezikhathi ezithile. Ngokufanayo, ungakha benezincwadi engalingani ukushisa, noma ezinye amakamelo abangekho abadinga bafudumale.
Ukugeleza Umlawuli valve. Lapho kulungiselelwa kwenziwa, it is edalulwa balancer wakhona ubude ipayipi elihambisana nentaba. Control - le imitha for underfloor ezininginingi, njengoba uphawu esikalini kungenziwa bahlulelwe inani ukugeleza oyifunayo.
Amazinga e izihitshela kungenziwa enakekelwa valve thermostatic. Bamukela isiginali kusuka inzwa lokushisa noma phansi egumbini, okwathi ngemva kwalokho kokupholisayo ukugeleza rate sishintshwe electro-ezishisayo actuator.
valve thermostatic kungaba ngesandla adjustable. Isetshenziselwa lapho ngalendoda esilula Ukushisa amanzi phansi efakwe uhlelo ngezimiso njalo.
underfloor ngalendoda ukhonza ngokulinganayo ukusabalalisa kokupholisayo ngokusebenzisa amapayipi Ukushisa nge ukuxuba iyunithi namanzi ukugeleza nabalawuli.
Ukuze Ukushisa elula ngezimiso esitebeleni efanelekayo kudivayisi kulungiselelwa nge valve. Ukuze amaningi-eziyinkimbinkimbi yesimanje Ukushisa izinhlelo zidinga ephelele ukuphathwa ezishisayo.
Indlela moisten emoyeni egumbini ngaphandle humidifier? Kungani ngidinga humidify emoyeni ekamelweni?
Inhlangano futhi Ukusetshenziswa Surveillance Ikhamera detector
Yiziphi iqembu ukufinyelela ngokuphepha kagesi?
"Gulfstream Security Systems" inkampani. Izibuyekezo umsebenzisi
I degree of umlilo ukumelana kwezakhiwo kanjalo nezinhlaka: izindlela ukuzimisela
Car Alarm "Starline A91": imfundo manual. "Starline A91": wiring idayagramu
Kanjani ukuze ungeze amavidiyo "Twitter" ku-akhawunti yakho
Umndeni "Opel Astra" - izibuyekezo abanikazi (entsha hatchback isizukulwane)
Boris Klyuyev: Biography, Filmography, nomndeni umlingisi sika
Isilinganiso sentela intela zokuthutha. Indlela yokuthola isilinganiso sentela ka intela yezokuthutha?
Yokuhlanza Mechanical ebusweni. Izibuyekezo nezincomo ukuqaliswa izinqubo
Kuyini Adsm Ukugonywa
Umuthi we-oki IsiZulu: incazelo isitshalo
Tattoo Georgiya Pobedonostsa - ukukhetha ngokugqamile
Amafulegi Ukraine. What do imibala ifulege Ukrainian?
Sitshele ukuluka ngensonto a gum double, kanye "inyoka" French
Amafolda Ikheli: Uhlolojikelele, izinhlobo, injongo. ikheli Ifolda ukungena ngemvume